May 4, 2021 - समृद्ध नेपाल
नम्बर १ बिमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स २१औँ वर्षमा !
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड आफ्नो स्थापनाको २० वर्ष पूरा गरी २१औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कम्पनी विसं २०५८ वैशाख २१ गते स्थापना भई बीमित तथा सेवाग्राहीलाई निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईँले २१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सन्देशमार्फत हाल कोरोना भाइरस महामारीका कारण सम्पूर्ण विश्व नै
बैतडीमा वडासदस्यको शव बोकेको जिप दुर्घटना पाँचजनाको मृत्यु !
बैतडीमा सोमबार चट्याङ लागेर मृत्यु भएका पञ्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का सदस्य गोविन्द सिंह भण्डारीको शव पोष्टमार्टमका लागि ल्याउँदै गरेको से१ज १२३ नम्बरको बोलेरो जीप दुर्घटनामा परी बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा चालक सहित ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । पञ्चेश्वर गाउँपालिका–६ रोडिदेवलको गणमेश्वर मन्दिर नजिकै जिप दुर्घटना भएको हो ।जीप दुर्घटना हुँदा पञ्चेश्वर
समाजमा अहिले विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण अहिले धेरैको परिवार विग्रिएको छ । एक जना विवाहित छोराछोरीका बुवाले अविवाहित युवती लिएर हिँडे । प्रहरी कार्यालयमा लिएर गएका यि जोडीले बरु प्रहरी कार्यालयमा बस्छौं तर एक अर्काको साथ छोड्दैनौं भनेका छन् । छोराको वुवा समेत भइरहेका ति श्रीमानले बरु म जेल बस्छु आधा अंश दिन्छु म उसंग बस्न
पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा सुन्दर र हटतस्विरका कारण केहि महिलाहरु निकै भाइलर भएका छन् । यतिबेला सुन्दरताको कारण भाइरल हुनेको संख्या निकै बढ्दोक्रममा छ । सुन्दरताकै कारण एक सुन्दर युवती सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेकी छन् । नाम केतिका शर्मा हो । २४ डिसेम्बर १९९५ जन्मेकी केतिको शरीर निकै आर्कषक खालको छ । उनकाे सुन्दरताले
निषेधाज्ञामा जाम देख्दा ट्राफिक नै चकित, पूर्ण रोक लगाउने तयारी !
निषेधाज्ञामा पनि काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न सडक चोक तथा सुरक्षा चेकजाँच स्थलमा ट्राफिक जाम देख्दा स्वयं सुरक्षाकर्मीहरू नै आश्चर्यमा परेका छन् । कोभिड–१९ महामारीको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको सोमबार पाँचौँ दिन हो आइतबारबाट निषेधाज्ञा थप कडाइको निर्णय भए पनि सडकमा सवारीसाधनको चाप ह्वात्तै बढेको छ । अत्यावश्यक कामका लागि सवारी पास लिएका
द्धन्द्ध निर्देशक राजेन्द्र खड्कीले फेरी वरिष्ट हाँस्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यबीचको सम्बन्धका बारेमा पनि खुलासा गरेका छन् । उनी प्रष्ट वक्ता हुन् । त्यसैले उनले धेरै कलाकारका बारेमा खुलासा गरिदिन्छन् । उनले केही समय अघि दिवंगत नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र श्वेता खड्काको बारेमा केही नयाँ कुरा सार्वजनिक गरिदिएका थिए । उनी पुराना कलाकार
ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभराको दर्शनमा आएका एक बालकको लेक लागेर मृ’त्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–८ याङ्नामका दुई वर्षीय बालक उत्सव लिम्बूको आज मृत्यु भएको हो ।अभिभावकले आफ्ना बालकलाई पाथीभरा दर्शनका लागि लिएर आएका थिए । देवीको दर्शन गर्न जाने क्रममा पाथीभरा क्षेत्रको फेदीबजार नजिक बाटोमै अचानक बेहोस भएपछि बालकलाई उपचारका लागि
साढे दुई रुपैयाँको मास्कलाई १० रुपैयाँ लिनेलाई सरकारले यस्तो कार्बाही गर्ने घोषणाकाठमाडौँ । कोभिडको मौका छोपी सर्जिकल सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूले मास्कमा अनुचित मूल्य लिएपछि सरकारले कारबाही थालेको छ । अनुगमनका क्रममा कम्पनीहरूले प्रतिपिस मास्क २ रुपैयाँ ४ पैसामा होलसेललाई बिक्री गरेको पाइएको छ । तर सोही मास्क सर्वसाधारणले प्रतिपिस १० रुपैयाँभन्दा बढीमा किन्नुपरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा